एमसीसीको समर्थन गर्नेहरु देशद्रोही भएको सांसद प्रेम सुवालको टिप्पणी - khulla Post
काभ्रे प्रशासनका अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवाहरु बन्द ७ माघ २०७८, शुक्रबार १६:१६
नेपाल आयल निगमले फेरि बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ५ माघ २०७८, बुधबार २०:४१
काभ्रे जिल्लामा आज एकैदिन १ सय ७३ जना कोरोना संक्रमित थपिए, ४ जना उपचारपछी निको ५ माघ २०७८, बुधबार २०:२७
रोजगारीका लागि बिदेसिएका ललितपुरको गिम्दीका युवाले यसरि गाउँको मुहार फेरे ४ माघ २०७८, मंगलवार २०:२५
देशभर कोरोना फैलिएपछि कडाई, हटस्पटहरुमा लकडाउन हुनसक्ने २५ पुष २०७८, आईतवार २०:०५
ओल खेतीबाट यसरि हुन्छ करोडौं आम्दानी (भिडियो सहित) हेर्नुहोस् २५ पुष २०७८, आईतवार १९:४९
सार्वजनिक निकायमा जाँदा माघ ३ गतेदेखि अनिवार्य खोप लगाएको प्रमाण देखाउनुपर्ने २५ पुष २०७८, आईतवार १९:२२
कोरोना संक्रमण तीब्र रुपमा फैलदै, माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने सीसीएमसीको निर्णय २५ पुष २०७८, आईतवार १९:१५
एमसीसीको समर्थन गर्नेहरु देशद्रोही भएको सांसद प्रेम सुवालको टिप्पणी
पुरुषोत्तम ढकाल ७ पुष २०७८, बुधबार १९:४६ 155 Views
भक्तपुर: नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी)लाई समर्थन गर्नेहरु देशघाती र देशद्रोही भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ ।
एमाले अवरोधकाबीच आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले एमसीसीलाई समर्थन गर्नेहरु देशघाती र देशद्रोही भएको बताउनु भएको हो । उहाँले नेपाल र अमेरिकाबीचको एमसीसी सम्झौंतामा भारतको गोरखपुरसम्म विद्युत प्रशारण लाइन तान्ने कुरा कहाँबाट आयो ? भन्दै सरकारसँग प्रश्न समेत गर्नु भयो ।
उहाँले नेपालको विद्युत नेपाललाई आवश्यक रहेको र त्यसले नेपालमा विद्युतबाट चल्ने रेल र विद्युतीय सवारी साधन संचालन गर्न सरकारसँग माग पनि गर्नु भयो ।
सांसद सुवालले भन्नु भयो, ‘नेपालको बिजुली भनेको नेपाललाई नै चाहिन्छ । एमसीसी सम्झौंता भनेको नेपालको बिजुली भारत हुँदै सिंगापुर लाने हो । एमसीसी सम्झौंताको अनुसूचि ५ (क) मा गोरखपुरसम्म प्रशारण लाइन तान्ने उल्लेख छ ।
अमेरिका र नेपालको सम्झौंतामा गोरखपुरसम्म बिजुलीका लाइन तान्ने कहाँबाट आयो ? कुनै पनि देशभक्त नेपालीले यो देशघाती एमसीसी सम्झौंतालाई समर्थन गर्न सक्दैनन् । एमसीसीको समर्थन गर्नेहरु देशघाती र देशद्रोही नै हुन् । यसमा कुनै फरकै छैन । यो विषयमा सदन र सरकारको ध्यान जाओस् ।’
सांसद सुवालले एमसीसीको विषयमा सरकार र सदनले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याउनुभयो । उहाँले एमालेले अवरोध गरिरहेका बेला संसद बैठक सञ्चालन गराउन नहुने अडान पनि दोहोर्याउनु भयो ।
कृषि उद्यममा वर्षको १५ दिन कार्यकर्ताले श्रम गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको आर्थिक नीति सार्बजनिक
माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत
कांग्रेस महामन्त्री थापाद्वारा अभिभावकविहीन बालबालिकाहरु लाई भरोसा छात्रवृत्ति अभियान सुरु
राष्ट्रिय सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा लैजाने माओवादी केन्द्रको निर्णय
काभ्रे प्रशासनका अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवाहरु बन्द
नेपाल आयल निगमले फेरि बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य
काभ्रे जिल्लामा आज एकैदिन १ सय ७३ जना कोरोना संक्रमित थपिए, ४ जना उपचारपछी निको
रोजगारीका लागि बिदेसिएका ललितपुरको गिम्दीका युवाले यसरि गाउँको मुहार फेरे
देशभर कोरोना फैलिएपछि कडाई, हटस्पटहरुमा लकडाउन हुनसक्ने